KhabarSamachar | हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या को बारेमा जान्नै पर्ने अति नै महत्वपूर्ण जानकारी ।
हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या को बारेमा जान्नै पर्ने अति नै महत्वपूर्ण जानकारी ।
२०७८ कार्तिक १४, आईतवार १०:४१
शरीरको सबै अंग वा शरीर को कुनै पनि भागको सुचना मस्तिस्क मा पुगेपछी हामिलाइ दुखेको,पोलेको वा स्पर्स भएको थाहा हुने गर्दछ । शरीरमा अङगहरू चेतना बिहिन हुने समस्यालाई हामी निदाएको वा झमझमाएको भन्छौं । खुट्टा निदायो, हात निदायो भन्छौं । तर किन निदाउँछन् भन्ने बारेमा हामिले कमै मात्रामा बुझेको हुन्छौं । कहिले काँही बस्न अफ्ट्यारो भएको कारण ले गर्दा खुट्टा निदाउनु सामान्य हो । तर सधैं जुनसुकै समयमा पनि हात खुट्टा निदाइरहने गर्छ भने शरीरमा केहि न केही समस्या छ भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसपछि चाडैं नै डाक्टर कहाँ गइ जचाउनु पर्दछ ।
यस पोस्ट अति नै महत्वपुर्ण जानकारी हात खुट्टा किन झमझमाउछ वा निदाउँछ ? हात खुट्टा झमझमाउदा वा निदाउँदा के समस्या हुन्छ ? हात खुट्टा के कारण ले झमझामाउछन् ? वा निदाउँछन्, भन्ने विषयमा अति नै महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । कृपया पुरा पढेर राम्रो ज्ञान लिन सक्नु हुनेछ ।
हाम्रो शरीर को प्रत्येक अंगहरुमा मस्तिस्कलाई सुचना दिने कोशीय फाइबर नसाहरू रहेको हुन्छन । शरीर को प्रत्येक अङगहरुको सुचना उक्त कोशीय फाइबर नसाले फरक-फरक सूचनाहरुलाई मस्तिस्कमा पुर्याउने काम गर्छ । उक्त कोशीय फाइबर मालिन नामक सेतो पदार्थ बाट बनेको एक प्रकारको झिल्ली हो । यही झिल्ली मा दबाब पर्ने बित्तिकै मस्तिस्कको त्यो भाग भन्दा मुनि रहेको भागको संचार कम्युनिकेसन टुट्ने गर्छ र त्यो अङगको बारेमा केही जानकारी लिन मस्तिस्क ले सक्दैन र हात खुट्टा निदाएको समय चिमोट्दा पनि नदुख्ने हुन्छ । विशेष गरी रगत संचालन हुन नपाएर रक्तनली बाट अक्सिजन को सप्लाइ हात खुट्टामा पुग्न नसकेर हात खुट्टा ले अक्सिजन पाउनको लागी प्रतिक्रिया गर्न सुरु गर्छ र मस्तिष्कमा एक प्रकारको झमझम भएको संकेत महसुस हुन्छ र हामी उठेर हिड्न हातखुट्टा तन्काउन सुरु गर्छौं । यही कारण ले गर्दा हात, खुट्टा निदाउँदा झमझम हुने गर्दछ ।
पलेटी मारेर धेरैबेर बसेर उठ्दा खुट्टा निदाएर टेक्नै नसकिने भएको हुन्छ । यदि पलेटी मारेर बस्दा खुट्टा निदाउछ भने बिस्तारै-बिस्तारै खुट्टाको पैतलामा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले पलेटी मारेर धेरै समय नबस्नुहोस् । तास निरन्तर खेल्ने मानिसहरु पलेटी मारेर धेरै जनाको टिम बनाएर बस्छन, ब्यापारीहरू दोकानमा पलेटी मारेर बस्छन । उनिहरुमा पैताला निदाइ रहने कम्मर दुख्ने समस्या बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसरी बस्दा रक्तनलीको नसा च्यापिने, मस्तिस्क को नर्बफाइबरमा दबाब पर्ने हुन्छ र हातखुटटा निदाउछ । कहिले काँही तनाब, चिन्ता को कारण ले पनि पैताला पोल्ने, खुट्टा तातो हुने, निदाएको जस्तो झमझम महसुस हुने गर्दछ । यस्तो समस्या सुगर को बिमारीलाइ बढी नै भै रहने हुन्छ ।
उमेर जति बढ्दै गयो त्यती नै हामिलाई विभिन्न रोगले च्याप्दै जाने गर्छ । तर पनी हात खुट्टा निदाउने समस्या यदि निरन्तर भइरहे डाक्टर सँग परामर्स गरेर डाक्टरले के-को कारण ले हात खुट्टा निदाइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने छन् । हड्डी खिएर हो वा नसा च्यापिएर हो, भिटामिन को कमीको कारण ले हो की, ब्लडको नसा बन्द भएर हो की केहो भन्ने बिषयमा डाक्टरले चेकजाँच गरे मात्रै थाहा हुने गर्छ । हाम्रो ढाड को मेरुदण्डमा पानी जमेको कारण ले पनि यस्तो हुने गर्दछ । त्यसैले यदि कहिले काँही मात्रै हो भने सामान्य पनि मानिन्छ तर निरन्तर भै रहयो भने जटिल अवस्था पनि हुन सक्छ । पुरुषमा भन्दा महिलामा‌ हात खुट्टा निदाउने समस्या बढी हुने गर्दछ ।
निरन्तर हात खुट्टा निदाइरहन्छ भने मनतातो तेल ले मालिस गर्नुपर्दछ । मन तातो तेल लगाएर मालिस गरे शरीरमा रगत संचालन राम्ररी हुने गर्छ र शरीरको अङगहरुपनि राम्रो सँग चल्ने गर्छन । त्यसै गरी मन तातो पानीले धोएर मालिस गर्नुपर्दछ । मन तातोपानीमा खुट्टा डुबाएर करिब १५ मिनेट सम्म दैनिक राख्नु पर्दछ । दैनिक शारीरिक कसरत गर्नुपर्दछ ।यसो गर्दा रक्त नलिहरु मा रगत को प्रवाह बढ्दछ र रक्त नलीहरु च्यापिन पाउदैनन । यति गर्दा हात खुट्टा निदाउने समस्याहरु हटेर जान्छन् । विशेष गरि दुबै खुट्टा र दुबै हात निदाउने समस्या छ भने भिटामिन बि १२ को कमिको कारण पनि हुने गर्दछ। त्यस्ता मानिसहरुले भिटामिन बि १२ भएका खाना खान सुरु गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ । खानामा भिटामिन बि १२ र क्याल्सियम हुने किसिमका खानाहरु खानुपर्दछ ।
माछामासु, बिदेशमा रहनु हुनेहरुले समुन्द्री माछाहरू, झिगेमाछा, चिज, दुध, मेवा, सुठुनी, गाजर, फर्सीहरुको सेवन गर्नुपर्दछ ‌। क्याल्सियम र प्रोटिन को लागी दुध पिउनुपर्दछ । पानी नमिसाइएको १ गिलास शुद्ध दुधमा १८० मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । त्यसैगरी सजिवन को ५० ग्राम पातमा १५७ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । एक कप दहिमा २९८ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । यदि कोहि गँगटा खाने गर्छ भने उसले बुझ्न जरुरी छ कि एक गँगटामा १३७० मिलिग्राम क्यालसियम पाइन्छ । गहत को दाल र तिलमा पनि क्यालसियम पाइन्छ यस्ता क्यालसियम हुने खानाहरु बढी खानु पर्दछ ।